New players only. Wagering occurs from real balance first. 50x wagering the Bonus or any winnings generated from free spins, contribution may vary per game. Available on selected games only. The wagering requirement is calculated on Bonus bets only. Bonus is valid for 30 Days/ free spins valid for7days from issue. Max conversion:5times the Bonus amount or from free spins: $/£/€ 20. အပြည့်အစုံသက်ဆိုင်ပါသည်။
SlotsMobile ProgressPlay လီမိတက်၏ Soho ရုံး 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်၊ ProgressPlay သည်မော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်ထားသောတာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် (C58305), ၎င်းသည်လိုင်စင်နှင့်မော်လ်တာဂိမ်းကစားခြင်းအာဏာပိုင်တို့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 16ပြီ ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော MGA / B2C / 231/2012 လိုင်စင်နံပါတ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်; နှင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည် လောင်းကစားကော်မရှင်, လိုင်စင်နံပါတ် 000-039335-R-319313-016 ။ ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှလောင်းကစားသူများသည်လောင်းကစားကော်မရှင်မှထုတ်ပေးသောလိုင်စင်ကိုမှီခိုနေကြသည်။ လောင်းကစားသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ တာဝန်သိကစားကစားပါ။
ကိုယ်တို့အကြောင်း | ပရိုမိုးရှင်းများ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | တာဝန်ရှိလောင်းကစား | စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ | VIP | ဂိမ်းငွေပေးချေခြင်း | ငွေသွင်းရန်ရွေးချယ်စရာများ | ဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများ | တွဲဖက် | ဆက်သွယ်ရန် | အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ